San Expedito «Umthandazo» »【UMxhasi wezizathu ezingxamisekileyo】
Intsomi ithi nangona yayilijoni laseRoma, umkhuseli oqinileyo woBukhosi, ngenye imini intliziyo kaSan Expedito yachukunyiswa lubabalo lukaThixo, eguqukele kubuKrestu.
Kubonakala ngathi kanye ngalo mzuzu wokuguquka kwakhe idemon yabonakala kuye ingohlobo lwehlungulu ngenjongo yokumnqanda, ukumngxolisa "Iikreyiti, ii-cras, ii-cras", ogama lithetha ngesiLatin "ngomso, ngomso, ngomso."
Ayimfutshane kwaye ayonqenanga, ingcwele ekuthethwa ngayo iphendule ngamandla kwaye yatyumza unomyayi ephindaphinda "Hodie, hodie, hodie", intsingiselo yayo kwisiLatini yile "namhlanje namhlanje namhlanje". "Andiyi kushiya nantoni na yangomso, ukususela namhlanje ndiya kuba ngumKristu ", Waqhawula. Ukuthetha ngokungqongqo ngolu hlobo kumzuzele isihloko sobungcwele esiya kubunzima obungxamisekileyo.
1 Ngubani ingcwele ehlangabezana nezona mfuno zingxamisekileyo?
2 Ngaba ingcwele enegama elithetha "ukukhawuleza" yayikhona?
3 Ibali elenziwe lajikeleza ijoni lomkhosi waseRoma "uFulminante"
4 Igama lokuqala San Expedito lithetha ntoni
5 Imelwe njani ingcwele eyayingumkhosi wamaRoma
6 Ungambuza njani uMqeshi wolutsha
6.1 Umthandazo kuSanta Expedito ngezizathu ezifanelekileyo nezingxamisekileyo
6.2 Ividiyo ngomthandazo kuSanta Expedito:
Ngubani ingcwele ehlangabezana nezona mfuno zingxamisekileyo?
Le ngcwele yayiyindoda yamajoni yaseRoma eyayiphila ekuqaleni kwenkulungwane ye-IV, isenza isikhundla sokuba yinjengele yomkhosi waseRoma ngexesha lika-Emperor Diocletian.
Eminye imithombo imbeka njengomntu owayephila ngexesha likaSanta Philomena kwaye uqinisekisa ukuba ukubulawa kwakhe ngenxa yokholo kwenzeka ngo-Epreli 19, 303. Nangona eyingcwele eyaziwayo ngamaKatolika athembekileyo, akabonakali kwityala lamaKatolika.
Ngokubhekisele kwisenzo sakhe sobu-canonation, khange siphononongwe yiCawa yamaKatolika kwaye nangona Nge-19 ka-Epreli kubhiyozelwa iSan ExpeditoInyani yile yokuba lo mbutho awubhengezwa ngokubanzi.
Ngaba ingcwele enegama elithetha "ukukhawuleza" yayikhona?
Ngendlela emangalisayo ngayo ubukho bale ngcwele busabuzwa. Imvelaphi yokuzinikela ibuyele kwi-1781, xa ibhokisi enezinto ezingaziwayo yafunyanwa kwikhaya loonongendi laseParis.
Ezi zinto zaziza kufunyanwa kumangcwaba angaphezulu kwesikwere IDenfert-Rochereau. Inyaniso yokuba umthumeli, ongowesixeko esinye, wabhala kwilizwi ebhokisini "Spedito" (eliguqulela "njengeposi ecacileyo"), ngeenjongo zokukhawulezisa ukuthunyelwa kwazo, zenze oonongendi bacinge ukuba izinto zabangcwele zezomntu obizwa ngokuba ngu "San Spedito".
Nangona kunjalo yena Umartyrology yaseRoma wabizwa ngokuba ngumfeli-nkolo ongaziwayo ogama lakhe liza kuba ngu-Expeditus, kunye nokuchithwa kwakhe ngu-Expediti, oonongendi bacinga ukuba babephambi kwamathambo omfeli-nkolo owabonakala kulwalamano olunjalo. Ukususela ngalo mzuzu ukuya phambili, bathandazela ukuba angathandazeli. Xa imithandazo yakhe yaphendulwa ngokukhawuleza, ukunqulwa komntu ongcwele kwasasazeka kwilizwe lonke laseFrance.
Akuzange kube kudala ngaphambi kokuba kunikwe umhla, ohambelana nenkulungwane yesine, ukuze kuqinisekiswe ngokuqinisekileyo. Iyaqwalaselwa "Igqwetha lezizathu ezingenakwenzeka" isihloko awabelana ngaso noSanta Rita kunye Ongcwele uJude Thaddeus.
Ibali elenziwe lajikeleza ijoni lomkhosi waseRoma "uFulminante"
Inyani yile yokuba ukusukela ukuphela kwenkulungwane ye-XNUMX kwaye mhlawumbi nangaphambi koko, kwaveliswa ibali malunga nale ngcwele imangalisayo.
Injalo imeko, ngewayengumphathi we-XII Roman Legion, ogama lakhe lalingu "Fulminant", enikwe umdlalo wobukhosi awenza kuwo. Yayisekelwe kwisithili saseMelitene (eKapadokiya), ngoku eyiMalatya (Turkey), isihlalo selinye lamaphondo amaRoma aseArmenia, ngasekupheleni kwenkulungwane yesithathu.
Lo mkhosi wawenziwe ikakhulu ngamajoni angamaKristuEzona njongo ziphambili yayikukhusela imida yasempuma kwimimandla eyahlaselwa ngamaRoma ngokuchasene nokuhlaselwa kweHuns.
Ubomi bukaEppedito ngaphambi kokuguquka kwakhe buya kuchithwa. Emva kwayo, washumayela kulo lonke iqela, ebasondeza kubuKristu. Le meko kufanele ukuba yamcaphukisa uMlawuli uDiocletian, kuba ukubaluleka kwesikhundla sakhe kwamfaka kwiziphambuka zomongameli. Kukholelwa ukuba wayenokubethwa aze kamva anqunyulwe intloko ngekrele.
Igama lokuqala San Expedito lithetha ntoni
Ligama elinemixholo yasemkhosini. NgesiSpanish, i-expedito sisichazi esivela kwi-Latin expeditus ebhekisa kuyo ukukhululeka kuzo zonke izithintelo kwaye ukulungele ukwenza.
KwiRoma yamandulo kwakusithiwa amajoni amatsha e-expediti okanye kwi-expeditionem xa esenza njalo kuphela ngezixhobo zawo nangaphandle komthwalo. Ngokuchasene noko, babematsha i-impediti ngalo lonke ixesha besenza oko nge-impedimenta yabo, umbono oquka ibhegi yokulala, izixhobo zokutya, izixhobo zezihlangu, iziphumo zobuqu, ukutya kunye nezixhobo.
Igama elithi expediti lalikwasetyenziselwa ukubhekisa ekwakhiweni komkhosi owawuyivumela ukuba isebenze njengombane okhanyayo, onikwe isantya esikhulu kwiminyakazo yawo. Kungenzeka ukuba kulapho igama elithi San Expedito livela khona okanye ukuba ingcwele yaqala umsebenzi wayo wezomkhosi kwiyunithi eyayilandela ezi paramitha zinye, apho wayeza kufumana khona igama lakhe.
Imelwe njani ingcwele eyayingumkhosi wamaRoma
Imifanekiso yalo mntu ungcwele imbonise enxibe umkhosi wamajoni aseRoma, enxibe isinxibo esifutshane kunye nengubo ebuyiswe umva emagxeni, ngokuka ifashoni yasemkhosini yexesha.
Ukuma kwakhe kukulwa. Kwesinye sezandla zakhe uphethe igqabi lesundu njengophawu lokufela ukholo kwaye kwelinye umnqamlezo obonisa igama "Hodie", "Namhlanje" ngesiLatin, njengembeko kulo mlando ukhankanywe ngasentla. Ngonyawo lwasekhohlo unyathela unomyayi ekhala "Cras", "Ngomso" ngesiLatini.
Ungambuza njani uMqeshi wolutsha
Nangona iSan Expedito yaziwa kwihlabathi liphela ngesipho sayo esinqabileyo sokusombulula ezona mfuno zingxamisekileyo, ukwanguMxhasi wabaNtu abaDala, uMlamli kwiinkqubo kunye novavanyo, uNcedo lwaBafundi, iMpilo yabaGulayo kunye noMkhuseli kwiNkqubo yoSapho, yezeMisebenzi neyeMpilo. Ishishini, ukongeza ekubeni ubenakho ukubhenelwa kwezinye iimeko.
Umthandazo kuSanta Expedito ngezizathu ezifanelekileyo nezingxamisekileyo
“I-Expedito yam eNgcwele yezizathu ezifanelekileyo nezingxamisekileyo, ndithetheleleni kunye neNkosi yethu uYesu Krestu, ukuze andincede ngeli lixa lenkxwaleko nokuphelelwa lithemba.
ISan Expedito yam wena uliQhawe eliNgcwele.
Wena uyiNgcwele yabahluphekileyo, Wena uyiNgcwele yeziphelelwa lithemba, Wena uyiNgcwele yezizathu ezingxamisekileyo, ndikhusele, ndincede, undinike: amandla, isibindi nokuzola.
Khathalela iodolo yam! (yenza iodolo).
ISan Expedito yam, ndincede ndiphumelele kwezi yure zinzima.
Ndikhusele kubo bonke abo banokundenzakalisa, khusela usapho lwam.
Khathalela isicelo sam ngokungxamisekileyo.
Ndibuyisele uxolo noxolo.
ISan Expedito yam! Ndiya kuba nombulelo ngobomi bam bonke kwaye ndiya kusasaza igama lakho kubo bonke abanokholo.
Ividiyo ngomthandazo kuSanta Expedito: